Why We should Learn English from Mobile App
အကယ်၍များ သင်က အင်္ဂလိပ်စာ ကို စနစ်တကျ လေ့လာလိုသူ ၊ ကိုယ့် အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးကို စနစ်တကျ အဆင့်ဆင့် မြှင့်တင်ချင်သူ တစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ခုလို Stay Home ကာလတွေက သင့်အတွက် Application တွေက တဆင့် လေ့လာ ဖို့ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးလို့ ဆိုရမှာပါ။ ▫️ ဒီတော့ အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာဖို့ ဘာကြောင့် Online Application တွေကို ရွေးချယ်သင့်တာလဲ ?
“ Brain power improves by brain use, just as our bodily strength grows with exercise” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ဆိုတာမျိုးက ထက်လာအောင်အမြဲ သွေးပေးနေသင့်တဲ့ ဓားတလက်လိုပါပဲ။ ကိုယ်တိုင် နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ အမြဲ အသုံးပြုနိုင်မှ တိုးတက်လာတာမျိုးပါ။ ကျွန်တော်တို့ စတင်မွေးဖွားလာထဲက ၂၄ နာရီ လုံးလုံး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဦးနှောက်က တခါတလေ ကျွန်တော်တို့ မှတ်လို သမျှကို မမှတ်ထားနိုင်တာမျိုး၊ မှတ်ထားပြီးသမျှကို မေ့ပစ်လိုက်တာမျိုး စတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ကြုံရမှာပါ။
ဘဝရဲ့ တဆစ်ချိုးလို့ ခေါ်ဆိုင်နို်င်တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတိုင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံးသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကြီး နီးကပ်လို့လာပါပြီ။ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဆိုတာ တစ်နည်းပြောရရင် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းရမယ့် အနာဂတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အဆုံးအဖြတ် ပေးနိုင်မယ့် စာမေးပွဲလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလောက် အောင်မြင်မှုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
“Scholarship” ဆိုတာ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ပညာရေးနယ်ပယ်ကို အထူးစိတ်ဝင်တစားရှိကြတဲ့ လူငယ်လူရွယ်တိုင်းနဲ့ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်ပြီးသား စကားလုံးတစ်ခုပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသား လူငယ်တိုင်းအတွက် အောင်မြင်ဖို့ရာ လမ်းစ တစ်ခုလို့ ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ တခါတလေ ဒီလို အခွင့်အရေးမျိုး ရလာတာတောင် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် ဘယ်က ဘယ်လို စပြီး တွေးတောစဉ်းစားရမှန်းမသိ၊ ဘာတွေ ပြင်ဆင်လို့ ပြင်ဆင်ရမှန်းမသိနဲ့၊ ကိုယ်နဲ့ရော ကိုက်ညီရဲ့လား၊ တကယ်ရောတက်ချင်တာ ဟုတ်ရဲ့လား စတဲ့ မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးက ကြုံတွေ့နေရပါသေးတယ်။
MBA တက်ရောက်ပြီးတဲ့အခါ သင်ကိုယ်တိုင် သင့်ကိုယ်ကို မေးမိလိမ့်မယ်၊ ဒါမှ မဟုတ် လူအများစုက သင့်ကို မေးကြလိမ့်မယ်။ “အချိန်တွေ ငွေတွေများစွာ ရင်းပြီး တက်ရောက်လိုက်တဲ့ ဒီ MBA ပြီးတဲ့ အခါ ဘာလုပ်မှာလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးပေါ့။ MBA ဘွဲ့ရ တစ်ယောက်ဟာ ဘာလုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရရင် သူ့အတွေ့အကြုံ သူ့အရည်အချင်းအပေါ် မူတည်ပြီး “အများကြီး လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်” လို့ပဲ ဖြေရမှာပါ။
စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာအောင်မြင်စွာရပ်တည်ဖို့ MBA ကိုဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?
“Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen." ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ အပေါ်က စာသားလေးကို မြင်တွေ့ဖူး၊ ဖတ်ဖူးကြမှာပါ။ အောင်မြင်မှု ဆိုတာ အိပ်မက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင် ကြိုးစားရင် ကြိုးစားသလို ဆွတ်ခူးရယူနိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။ အောင်မြင်သူတိုင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ လူတွေ မသိကြတဲ့ ပေးဆပ်မှု၊ အရည်အချင်းနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေ များစွာ ရှိနေစမြဲပါ။
တိုးတက်မြင့်မားလာတဲ့ ၂၁ ရာစုရဲ့ ပညာရေး စနစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုး တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ Education Pathway အတွက် ကောင်းသည်ထက် ကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတွေလည်း များပြားလို့လာခြင်းပါ။ ဒီလို အခွင့်အရေးတွေထဲမှာမှ ကျွန်တော်တို့ အတွက် အထူးခြားဆုံး Chance လို့ ဆိုလို့ရတဲ့အရာကတော့ အားလုံးလိုလိုနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့ Scholarship ဆိုတဲ့ ပညာသင်ဆုပါ။ ပညာကို အမှန်တကယ် လိုလားသူတိုင်းအတွက် ပညာရေးပိုင်းရော ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပါ အထောက်အပံ့ ရရှိနိုင်မယ့် ဒီလို Scholarship အစီအစဉ်တွေက ယနေ့ခေတ် ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ ကျောင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးနေတာမို့ မိမိ အမှန်တကယ် ဝါသနာပါတဲ့ ဘာသာရပ်ကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး ကြိုးစား ဖြေဆိုလို့ ရနိုင်ပါပြီ။
“Education will bring you the opportunity to makeadifference.” ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ အပြောင်းအလဲကိုစောင့်နေမယ့်အစား ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုကို ကိုယ်တို်င်ဦးဆောင်ပြီး ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ဒီလိုဖန်တီးနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးကို ပညာရေးကသင့်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ အပြောင်းအလဲများစွာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ Digital Era မှာနေထိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက လူငယ်တွေအနေနဲ့လည်း နောက်ကောက်ကျကျန်နေခဲ့လို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ နိုင်ငံတကာကနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။
သင်ရရှိထားတဲ့ ဘွဲ့တွေ၊ ဒီဂရီတွေနဲ့ လုံလောက်ပြီလား?
အောင်မြင်ချင်ရင် စဉ်ဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ယူနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ချင်တယ်ပြောပြီးတော့ အပင်ပန်းမခံချင်လို့ မရဘူး၊ မကြိုးစားချင်လို့ မရဘူး။ ဒါကြောင့် သင်က ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်သူတစ်ဦးဆိုရင် သင်ယူလေ့လာမှု အားကောင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းတက်တယ်၊ တက္ကသိုလ်ရောက်တယ်၊ ဘွဲ့ရတယ်၊ အလုပ်ဝင်လုပ်တယ်။ ဒါလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမှာတင် ရပ်နေတော့မှလား။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်လှမ်းကြရအောင်လေ။ You Only Live Once ဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့၊ တစ်သက်မှာ တစ်ခါပဲ အသက်ရှင်တာ၊ အောင်မြင်မှုခြေရာတွေ ချန်ထားခဲ့ရအောင်။ ဒါဖြင့် ဟုတ်ပြီ၊ အောင်မြင်မှုရဲ့ သော့ချက်ကဘာလဲ?
Habits of A highly Effective Student
ကျွန်တော်တို့ အားလုံးလိုလို ဖြတ်သန်းလာကြရတဲ့ Student Life ဆိုတာနဲ့ ခွဲခြားထားလို့မရတာကတော့ Studying ဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါပဲ။ ကျောင်းသားဘဝကို ပျော်သလောက် စာကျက်ရတာကို မနှစ်သက်ကြတာကလည်း ကျောင်းသားတိုင်းလိုလိုရဲ့ အတူညီဆုံး အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲနီးမှ ဘယ်ဘာသာကို ဘယ်က ဘယ်လို စကျက်ရမှန်းမသိတာမျိုးတွေ၊ ကျက်ဖို့အချိန်မလောက်တော့တာမျိုးတွေ၊ စိတ်အပူလွန်ပြီး စာကျက်ဖို့ အာရုံစိုက်လို့မရတော့တာမျိုးတွေ၊ အကုန်စုပုံကျက်ပြီး တစ်ခုမှ ရေရေရာရာ မမှတ်မိတော့တာမျိုးတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ ကြုံဖူးကြမှာပါ။